Ahoana ny famahana ny Code 28 diso amin'ny Windows
Ny tsara indrindra amin'ny tranonkala
Fitantanana tranonkala iray
Fametrahana sy fanavaozana
TV sy Home Theater
Lalao & Consoles
Windows Hafatra diso
Ahoana no fandroahana Code 28 diso
Fitsidihana fanodikodinana ny hadisoana Code 28 ao amin'ny Manager Manager
Ny fehezanteny Code 28 dia iray amin'ireo mari-pamantarana diso ao amin'ny Device Manager . Naterak'ilay mpamily tsy hita ho an'io fitaovana manokana io .
Misy antony maromaro izay mety tsy hametrahana mpamily iray ho an'ny fitaovana iray fa ny olana momba ny olana dia tsy mitovy ny antony fototra.
Ny fahadisoana Code faha-28 dia saiky hitohy tahaka izao:
Tsy napetraka ireo mpamily amin'ity fitaovana ity. (Code 28)
Ny antsipirihany momba ny code codes error tahaka ny Code 28 dia hita ao amin'ny faritra " Device Status" ao amin'ny toetra ao amin'ny fitaovana ary dia hijery tsara tarehy tahaka ny sary azonao eto amin'ity pejy ity. Jereo ny fomba fijerena ny rafitry ny fitaovana ao amin'ny Manager Manager amin'ny fanampiana any.
Zava-dehibe: Fitsipika momba ny fametavetan'ny Device dia tsy misy afa-tsy amin'ny Device Manager . Raha mahita ny fehezanteny Code 28 any an-kafa any Windows ianao, dia ny fahamendrehana dia code fandefasana solosaina izay tsy tokony hanahiran-tsaina anao amin'ny resaka Manager Device.
Ny hadisoana Code 28 dia azo ampiharina amin'ny fitaovana maoderina ao amin'ny Device Manager saingy ny ankamaroan'ny fahadisoana Code 28 dia toa misy fiantraikany amin'ny fitaovana USB sy karatra feo .
Ny rafitra fiasan'ny Microsoft rehetra dia mety mahatsikaiky ny hadisoana Code Manager Device Manager, anisan'izany ny Windows 10 , Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista , Windows XP , ary ny maro hafa.
Ahoana no hamahana ny fitsipika 28 Error
Atsaharo ny solosainao raha tsy efa nanao izany ianao.
Misy foana ny fahafaha-mahamarina fa ny fahadisoana Code 28 izay hitanao amin'ny Device Manager dia vokatry ny fluke amin'ny Device Manager na ao amin'ny BIOS . Raha izany no izy dia mety hanamboatra ny Code 28 ny fiatoana indray.
Nametraka fitaovana ve ianao na nanova ny Manager Manager alohan'ny nahitanao ny Code 28? Raha izany no izy, dia azo antoka fa ny fiovana nataonao dia nahatonga ny hadisoana Code 28.
Atsaharo ny fanovana, atsangano ny solosainao ary jereo indray ny hadisoana Code 28.
Arakaraka ny fanovana nataonao no mety ahitana ny vahaolana vitsivitsy:
Fanesorana na fanavaozana ny fitaovana vaovao napetraka
Miverin-dàlana ny mpamily mankany amin'ny dikan-teny mialoha ny famoahana anao
Ampiasao ny Fanavaozana ny Rafitra hanavaozana ny fikatsoana ny Manager Manager
Hamafiso ny mpamily amin'ny fitaovana . Ny fametrahana ny mpamokatra farany mpamatsy mpamatsy amin'ny fitaovana iray amin'ny fehezanteny Code 28 dia ny vahaolana mety indrindra amin'ny olana.
Zava-dehibe: Ataovy azo antoka fa mametraka ny mpamily ho an'ny rafitra fiasa tsara ianao. Ohatra, raha mampiasa Windows 64 64 bit ianao , mametraka ireo mpamily natokana ho an'io Windows manokana io . Maro ny fahadisoana Code 28 dia vokatry ny fiezahana hametraka ireo mpamily diso amin'ny fitaovana iray. Ny fomba iray ahazoana antoka fa mahazo ny mpamily mety ianao dia ny mampiasa fitaovana maoderina maoderina .
Soso-kevitra: Raha toa ka tsy manavao ny mpamily, andramo ny fanesorana ny rindrambaiko Antivirus nandritra ny dingana vaovao. Indraindray, ireo fandaharan'asa ireo dia tsy mampiato ny mpamily anao amin'ny fampandehanana ho maloto ary hanakana azy io.
Hametraka ny kitapo farany amin'ny Windows . Ny Microsoft dia mamoaka fanontana serivisy sy paty hafa ho an'ny rafi-piasany, ka ny iray dia mety misy famahana ny olana momba ny hadisoana Code 28.
Fanamarihana: Fantatray tsara fa ny fonosana serivisy ho an'ny Windows Vista sy Windows 2000 dia nahitana famaha-pitsipika manokana ho an'ny tranga sasany amin'ny hadisoana Code 28 ao amin'ny Device Manager.
Hamafiso ny fitaovana . Amin'ny farany, mety mila misolo ny fitaovana misy ny hadisoana Code 28 ianao.
Azo atao ihany koa fa tsy mifanaraka amin'ny Windows version ilay fitaovana. Azonao atao ny manamarina ny Windows HCL azo antoka.
Fanamarihana: Raha mbola mihevitra ianao fa mbola misy rafitra rindrambaiko / orinasam-pandrafetana ity hadisoana ity, dia azonao atao ny manandrana manamboatra Windows . Raha tsy miasa izany dia andramo ny fametrahana madio ny Windows . Tsy manoro hevitra ny hanao ny iray amin'ireto safidy mafimafy kokoa ireto ianao alohan'ny hanandrana hanoloana ny fitaovana, fa mety tsy maintsy atao raha tsy misy safidy hafa ianao.
Azafady mba ampahafantaro ahy raha efa nanamboatra fehezanteny Code 28 ianao amin'ny fampiasana fomba tsy ahitana azy etsy ambony. Tiako ny hitazona ity pejy ity araka izay azo atao.
Mila fanampiana fanampiny?
Jereo ny fanampiana bebe kokoa momba ny fifandraisana amin'ny tambajotra sosialy na amin'ny alàlan'ny mailaka, famoahana ireo sehatra fanohanana teknolojia, sy bebe kokoa. Ampio aho hamela ahy fa ny fahadisoana diso azonao dia ny fahadisoana Code 28 ao amin'ny Manager Manager. Azafady mba ampahafantaro anay ihany koa ny dingana, raha misy, efa efa nanandrana ny hamaha ilay olana.
Raha tsy liana amin'ny fanamafisana io olana amin'ny Code 28 io ianao, na miaraka amin'ny fanampiana, jereo ny Ahoana no ahazoako ny ordinaterako fixed? Ho an'ny lisitra feno amin'ny safidy fanohanana anao, miaraka amin'ny fanampiana amin'ny zava-drehetra eny an-dalana, toy ny famaritana ny fikojakojana ny fikojakojana, ny famoahana ny rakitrao, ny fisafidianana ny fanompoana ary ny maro hafa.
Ahoana no hamahana ny D3dx10_43.dll tsy hita na tsy fahitana diso
Ahoana no hamahana ny User32.dll tsy hita na tsy fahitana diso
Ahoana no hamahana ny STOP 0x0000001D diso?
Ahoana no hamahana ny Msvcr71.dll tsy hita na tsy fahitana diso
Ahoana no hamahana ny Advapi32.dll tsy hita na tsy fahitana diso
Ahoana no hamahana ny Dxgi.dll tsy hita na tsy fahitana diso
Ahoana no hamahana ny Normaliz.Dll tsy hita na tsy fahitana fahadisoana
Ahoana no hamahana Helper.dll tsy hita na fahadisoana diso
Ahoana no fomba hamahana ny Steam.dll tsy hita na tsy fahitana diso
Inona ny Fahatonta TV Farany?
Famokarana fitaovana 3D sy Product Updates
Vaovao & Manaraka
Ahoana no ahazoana vola amin'ny findainao?
Fanamarihana Facebook mbola tsy manohana ny HTML, nefa mbola manana safidy
Onkyo TX-NR3009 sy TX-NR5009 Home Theater Receivers
Ny 7 Best USB-C Monitors mba hividy amin'ny 2018
Ny loko lehibe 7 lehibe indrindra azo vidiana amin'ny taona 2018 ho an'ny DSLR
Ny Top 12 Browser Security sy Internet Add-ons amin'ny Internet
7 Torohevitra Rehefa Misafidy Sport Headphones Fanatanjahantena
Inona ny DDL File?
Ny fampisehoana PowerPoint voalohany anao
Top Desktop Databases
Ahoana no hamoronana polygòn sy kintana amin'ny InDesign
Mampiasà tags amin'ny finday ao amin'ny Mac
Ahoana ny fandefasana ny valiny amin'ny Gmail
The Cheats on Suffering for PlayStation 2
Ahoana no hametrahana fiarandalamby mivantana avy amin'ny Google Maps
Fiatoana dimy ho an'ny mpanofana fiara simba
Hafatry ny Error Camera GE
Fampihetseham-peo ho an'ny fandefasana horonantsary mampihomehy amin'ny horonantsary vina
Ahoana ny Fandefasana DVD Recorder amin'ny Fahitalavitra.
Onkyo HT-RC360 3D Network Home Receiver
© 2021 mg.eyewated.com